मःम को पारखी हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस् है , तपाईको रक्तचाप बढ्नसक्छ ! - VOICE OF NEPAL
मःम को पारखी हुनुहुन्छ ? ख्याल गर्नुस् है , तपाईको रक्तचाप बढ्नसक्छ !
२० चैत्र २०७७, शुक्रबार २२:४२
नेपालीहरूमाझ लोकप्रिय खाजा मम अत्यधिक सेवन हुने गरेको छ । मानिसहरू स्टीम र फ्राई मम स्वाद मानी मानी खाने गर्छन् । तर स्वास्थ्यको हिसाबले मम गतिलो कुरा हैन किनकि यसले रक्तचापको समस्या बढाउँछ ।
एक ठूलो चम्चामा अमलाको रस र मह बराबर मिसाएर बिहान बेलुका पिउँदा उच्च रक्तचापमा राहत पुग्छ ।
कोरोनाविरूद्धकाे खोप लगाउन सर्वसाधारणकाे भीड
बीपी अस्पतालमा उपचारमा चरम लापरवाही: बेड नहुदा भुईमा राखेर उपचार, बिरामी मार्कामा
धुम्रपान जत्तिकै हानिकारक हुन्छ चिनी !
चीनको प्रयोगशालाबाट कोरोना भाइरस लिक भएको बारे फेरि बोल्यो डब्लुएचओ
पानीसँग जोडिएका यी रोचक तथ्यहरु के तपाईलाई थाहा छ ?
कागती पानी पिउनुस्, अनेकौं रोग भगाउनुस् !